भिंडे खुर्सानी र यसका फाइदाहरु
शनिवार, अक्टोबर 19, 2019
सरकारले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कन्फ्रेन्स’को आयोजना गर्ने
पाप नगर मर्ने बेला सास नगएर तड्पनु पर्ला है
औषधिद्वारा मोतियाविन्दुको सफल उपचार
मार्च 19, 2019 मार्च 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, भिंडे खुर्सानी, शिमला मिर्च
हजुरलाई भिंडे खुर्सानीबारे थाहा होला वा नहोला यसको बारेमा आज मैले केही जानकारी पस्कने जमर्को गर्दैछु । यसलाई शिमला मिर्च पनि भनिन्छ । यसको तरकारी मलाई मन पर्छ । आजकल होटल होस् वा घरमा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । भिंडे खुर्सानीको प्रयोग मानव स्वास्थ्यमा के कस्तो फाइदा हुन सक्छ भन्ने जानकारी हुन सके सबैले फाइदा उठाउने निश्चित छ ।
भिंडे खुर्सानी दमको रोगमा र क्यान्सरको रोगमा प्रयोग हुदै आएको छ । भिंडे खुर्सानीमा भिटामिन सी, भिटामिन ए र कैरोटीन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । सवैभन्दा रोचक कुरा के छ भने भिंडे खुर्सानीमा क्यालोरी हुदैन भने यसले मानव स्वास्थ्यलाई सवैभन्दा बढी असर गर्ने कोलेस्ट्रोल नबढाएको पाइन्छ ।
फोलिक एसिड र यसको फाइदाहरु
काजु र यसका फाइदाहरु
दही र मोहीका फाइदाहरु
पिस्ता खाँदा स्वास्थ्यमा पुग्ने फाइदाहरु
मानव स्वास्थ्यमा यो जस्ता अनेकौं औषधि प्राकृतिकले हामीलाई दिएको छ । आज गलत खानपिनका कारण मानिस रोगको दलदलमा फस्दै गएको छ । मानिस सवैभन्दा चेतनशिल प्राणी भएर पनि प्राकृतिकले दिएका यस्ता औषधि खान सकि रहेका छैनौं ।
हामीले सेवन गर्ने हरेक बस्तुमा मिसावट छ । विषादी मिसाएको तरकारी होस वा सुइ लगाएर बढाएको दुध होस् वा डिपो लगाएर बढाएको खसीको मासु होस वा कार्बेट हालेर पकाएको केरा होस् वा बिषादि हालेर उत्पादन गरेको तरकारी किन नहोस् यसले सबैलाई असर गर्न सक्छ ।
केहि बर्ष पहिले म केरा किन्न गाउँमा गएको थिए त्यहाँ मैले कार्बेट राखेर केरा पकाएको पाए र मेरो पहिलो प्रश्न थियो यो पाकेको केरा के हजुर खानुहुन्छ । यो प्रश्नले वहाँ एकछिन मेरो कुरा बुझ्नु भएन होला तर वहाँले यो हालेपछि केरा पाक्छ र यसलाई बजारमा बिक्री गर्न सजिलो हुन्छ भन्नुभयो ।
पछि मैले पुन: प्रश्न गरे र सोधे मेरो प्रश्नको जवाफमा हो हामी खान्छौ बेच्छौ भन्नुभयो र वहाँले कार्बेट राखेर स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको बताउनु भएको थियो । कतिपय कुरा जनचेतनाको अभावमा मानिस रोगको दलदलमा फस्दै गएको यो कुराले पुष्टी गर्दछ । के खाँदा स्वास्थ्यलाई नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा नजान्नाले मानिस जोखिमको सुचीमा परेको देखिन्छ ।
यस्ता कुराको जानकारी आम जनतालाई हुन आवश्यक छ । यदि सुचना दिदा दिदै अटेर गर्छ भने त्यस्तालाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ र सन्देश नपुग्ने ठाउँमा रेडियो होस् वा सडक नाटकको माध्यमबाट होस् वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गराएर भएपनि रोक्न सकेमा मानव कल्याण निश्चित छ ।
← फोलिक एसिड र यसको फाइदाहरु
नाष्टले नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने →
बैज्ञानिक अनुसन्धानका अनुसार दुध नपिउँनुका फाइदाहरु के के हुन् ?
मार्च 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
दुधसँग यी चीजहरु कहिले पनि नखानुहोस्
मे 23, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
शरीरमा प्रोटिन कम हुँदा के के हुन्छ ?
नोभेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 4
महिलाको चरमसुखका विषयमा पत्ता लागेका ६ वटा रोचक तथ्यहरु
सेक्समा चरम आनन्द प्राप्त गर्ने चरणहरु
महिलाहरु पुरुषका यी ५ कुराबाट टाढा भाग्छन्
सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाली प्रधानमन्त्रीलाई
सन् २०१९ र सन् २०१८ को नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेताको नाम घोषणा
सन् २०१९ रसायनशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार तीनजना वैज्ञानिकहरुलाई
सन् २०१९ भौतिकशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार तीनजना वैज्ञानिकहरुलाई
चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार दुई अमेरिकी र एक बेलायती वैज्ञानिकलाई
स्वप्नदोष (Night Discharge) को रोकथाम र उपचार
काउचोको प्रयोग गरेर बढाउन सकिन्छ सेक्स पावर